Tsy afaka miala!
fanontaniana Tsy afaka miala!
10 volana 3 andro lasa izay #1245 by SkipperLP
Hey ry zalahy
So in my P3D v3 i've installed some airplanes and sceneries.
Ny Sceneries dia miasa tsara, fa ny fiaramanidina rehetra napetrako hatramin'izao dia tsy miasa tsara.
Azoko atao ny tsy manaisotra ... na rehefa miala aho, kilaometatra monja aorian'ny fiantsonana.
Niezaka nametraka ny fahatsapako ho ambony aho ary ny "akaiky zero" (Sry tsy azoko antoka hoe inona no niantsoana azy) hatramin'ny minitra. ary max ... Tsy misy fiovana.
Amin'ny rivotra dia mifarimbona (na tena sarotra) ny fanaraha-maso.
Eo amin'ny tany dia mandeha tsara ny rafitra.
With Pre-installed aircrafts from Prepar3d everything works fine.
Olona manao ahoana?
Misaotra ny fanampiana
10 volana 2 andro lasa izay #1247 by SkipperLP
UPDATE: Fantatrao fa ny fifaliako dia tena tsy voaaro tsara ho an'ireo fiaramanidina. Apetraho amin'ny 1 ny "Zone Null" ary tsara kokoa izany.
Ny Joystick MY Joystick dia tsy mahatratra ny farany amin'ny lavaka feno na dia ao amin'ny Null Zone 1 aza.
Miaraka amin'ny Keyboard ny zava-drehetra.
9 volana 5 andro lasa izay #1288 by gaztop
Ampifanitsio ny lanjan'ilay voromby. Miezaha manala kely avy eo.
Raha miala amin'ny tany ianao, dia ny lanjany no olana.
8 volana 4 herinandro lasa izay #1295 by JackRiordan
1) Soraty ao amin'ny barazy Windows 10 ny kaonty. Kitiho ny safidy Set Up USB Game Controllers. Azonao atao ihany koa ny mahita an'io safidy io ao amin'ny Windows Control Panel ambany ny menu an'ny fitaovana sy ny endri-tsoratra.
2) Raha toa ka voatanisa ny controller na ny joystick, tsindrio ity ary tsindrio Properties. Ao amin'ny properties, tsindrio ny tabilao famaritana. Tsindrio ny bokotra calibrate. Araho ireo torolalana mba hanamarinana ny fitaovanao.
3) Sokafy ny mpanafaka ny sidina. Mandehana any amin'ny sakafo misy anao. Mandehana any amin'ny fanendrena Azianao. Manendre ny axe X ho anao amin'ny Axiler Aileron. Omeo ny axe Y ho any amin'ny Axis elevator. Ataovy azo antoka ny manamarina ny boaty mba hamerenana azy io, hany ka manosika ny haavo (orona) amin'ny fiaramanidina ny fomba fihodinana amin'ny tifitra. Omeo fepetra ho an'ny bokotra na fitaovana tianao hampiasaina ho an'ny mpamily ianao.
4) Mankanesa ao amin'ny menio calibration. Ataovy azo antoka fa alefa Normal. Atsaharo ny safidy. Aorian'ny fiezahana hisidina ny fiaramanidina, dia aizao ireo soatoavina araka izay ilaina.
5) Araka ny nolazain'i Gaztop, Mandehana any amin'ny gazy misy anao sy ny tahirin-tsakafo ary ataovy azo antoka fa tsy mitondra solika na entana betsaka ianao.
6) Alohan'ny hananganana, tsara ny manaraka lisitry ny lisitry ny fiaramanidina. Raha tsy manana iray ianao, google iray, ary manaraka azy.
7) Raha toa ianao ka mahavita misintaka, fa raha mahita ny tenanao miverina amin'ny tsorakazo mba hitazonana ny orona, dia mila manendry ny fanalahidy ianao amin'ny ascenseur (midina) sy ny ascensea ascense (up). Ataovy azo antoka fa manana ny famerenana amin'ny max ianao mba ahafahanao mihazona ilay bokotra fotsiny.
5 volana 2 andro lasa izay #1377 by Luciad10
SkipperLP dia nanoratra: FANTATRA: Fantatrao fa diso fanatanjahantena ho an'ny fiaramanidina ny fifaliako mutuelle TNS . Apetraho amin'ny 1 ny "Zone Null" ary tsara kokoa izany.
Azonao atao ihany koa ny misafidy joystick raha toa ka tsy mety amin'ny fanodikodinanao samihafa ny joystick.
Fotoana mamorona pejy: 0.468 segondra